ကျန်းမာရေးအရ ဖိုက်တင်ဇာတ်ကားတွေဆိုရင် ရိုက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ~ သရုပ်ဆောင် ကျော်သူ - Yangon Media Group
‘မြစ်တစ်စင်းရဲ့ ကျေး ကျွန်များ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွား ဖို့ရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကျော် သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီး အနုပညာနဲ့ ပရဟိတဆိုင်ရာ အကြောင်း အရာအချို့ကို အခုလိုပဲမေး မြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – ဦးကျော်သူရဲ့ လက် ရှိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကဘယ်လိုရှိလဲ။ ဇာတ်ကား တွေ ပြန်ရိုက်နေတာဆိုတော့ အဆင်ပြေရဲ့လား။
ဖြေ – ကျန်းမာရေးကတော့ ကျွန်တော် နှလုံးသွေးကြောလေး ချောင်းလဲပြီးပါပြီ။ ကျန်းမာတော့ ကျန်းမာပါတယ်။ အရင်လိုတော့ အရမ်းကြီးတော့ မကောင်းပါဘူး။ တစ်ခါတလေ မောတာတို့ အသက်ရှုမဝတာတို့တော့ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်ကလည်း လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ဖို့ပြောပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်သိပ်မရပါဘူး။ ဆေးလိပ်တွေဘာတွေလည်း ကျွန်တော် မသောက်တော့ပါဘူး။ ဇာတ်ကားတွေကတော့ ဖိုက်တင်တွေမဟုတ် တော့ အဆင်တော့ပြေပါတယ်။ စကားပြောတွေနဲ့ အမူအရာတွေကို သရုပ်ဆောင်ရတာပဲဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖိုက်တင်တွေဆို ရင်တော့ ရိုက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး – လက်ရှိအနုပညာလောက အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့အနုပညာလောကမှာ ကင်မရာတို့ Lighting တို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့အရင်က ကျွန်တော်တို့ရိုက်တုန်းကဆိုရင် မီးလုံးတွေဆိုရင် လူသုံးယောက်ဝိုင်းမရတယ်။ အခုဟာကတော့ လူ တစ်ယောက်တည်းမနိုင်တယ်။ စက်မှုပစ္စည်းတွေက ပိုကောင်းလာ တယ်။ ဘယ်နေရာတွေမှာ အားနည်းလာလဲဆိုရင် စက်မှုပစ္စည်းတွေ က ပေါ့လာသလိုပဲ သက်ရှိလူတွေက ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ဖို့မသင့် ဘူး။ ကိုယ်က အလုပ်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ အတွေးကောင်းကောင်း လေးတွေနဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ပေါ့သ လို ကိုယ်ကလည်းလိုက်ပေါ့နေရင်တော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ Lighting မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်း ရတယ် ရိုက်လို့ပြောပြီး ရိုက်လိုက်ရင် တည်းဖြတ်ရင် လုပ်လိုက်မယ် အသံတွေဆိုရင်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီလိုတည်းဖြတ်တာကိုပဲအားကိုးနေလို့မရပါဘူး။ ဒါမျိုးလေးတွေ ကိုယ်တွေဘက်က အားစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
မေး – လတ်တလောမှာရောဘယ်လိုဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးဖို့ လက် ခံထားလဲ။
ဖြေ – လက်ရှိမှာကတော့ ”မြစ်တစ်စင်းရဲ့ကျေးကျွန်များ” ဇာတ် ကားကြီးမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့တော့ ရှိပါတယ်။
မေး – ဒါရိုက်တာလုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်။
ဖြေ – ဒါရိုက်တာလုပ်မယ့်အပိုင်းကတော့ မကြာခင်မှာပဲ TV Series တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ရိုက်မှာကတော့ သုံးလလောက် ရိုက်မယ်။ နောက်နှစ်လလောက် ပေါင်းငါးလလောက်ဆိုရင်တော့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး – နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးမှာ အလှူငွေမရပ်အောင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲ မှုအပိုင်းတွေကိုရော ဘယ်လိုတွေလုပ်ထားပါသလဲ။
ဖြေ – နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ ပညာရေးဆိုရင်လည်း Volunteer ဆရာ၊ ဆရာမတွေ။ ကျန်းမာရေးပိုင်းမှာလည်း ထိုနည်းတူစွာပဲ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆရာမတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဓိကတော့ အလှူငွေရရှိဖို့နဲ့ အသင်းကိုစည်းကမ်းတကျခိုင်မာစွာလုပ်ဖို့ ဘယ် လိုလုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုလုပ်ပါတယ်။ တစ်ခုအရေးကြီးတာက ကျွန် တော်တို့အသင်း ရှေ့ဆက်ကောင်းမွန်အောင်လည်ပတ်နိုင်ဖို့က အလှူ ငွေ အရေးကြီးပါတယ်။ အလှူငွေမရပ်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အလှူငွေရပ်တယ်ဆိုတာကလည်း အကြောင်းနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ တစ်ခုက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဆင်းတာရယ်။ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကျ ဆင်းတာရယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ အလှူငွေတွေ ကျွန်တော်တို့ က ကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံးတာတွေ အဲဒီအချက်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒုတိယအချက်ကိုပဲ မဖြစ်အောင်ထိန်း ပါတယ်။
ဟဲဟိုး၊ ကော့သောင်းနှင့် မော်လမြိုင်လေဆိပ်သုံးခုကို PPP စနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက?
လွှတ်တော်တွင်းပေးခဲ့သော ကတိကို ဝန်ကြီးဌာနများ ဖော်ဆောင်နိုင်မှု အားနည်း တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုမ
အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲ အဖြစ် အိန္ဒိယနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည့် မြန်မာအသင်း ဟိုတယ် အခက်အခဲဖြင့် ကြုံတွေ??
လောလောဆယ် မည်သည့်ပါတီနှင့်မျှ မဟာမိတ်ဖွဲ့မည်မဟုတ်ဟု ဒီချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဆို